एक नायिकाको बयानः लगातार ९ घण्टा ‘इन्टिमेट’ दृश्य छायांकन गर्नुपर्दा निरन्तर आँसु बगिरहे
पुस २९ | एजेन्सी
हलिउड नायिका सिएना मिलरको फिल्म ‘लिव बाई नाइट’ आजकाल चर्चाको विषय बनेको छ । फिल्मका लागि उनले सहकर्मी बेन एफ्लेकसँग लगातार ९ घण्टासम्म ‘लभ मेकिङ’ का दृश्यहरु छायांकन गरेकी थिइन् । यसको अनुभव उनले एक चर्चित वेबसाइटसँग बाँडिन् । उक्त दृश्यको छायांकनको क्रममा आफूले आँसु रोक्न नसकेकोसमेत उनले खुलासा गरिन् ।
बिन एफ्लेक मुख्य नायक हुनुका साथै फिल्म ‘लिव बाई नाइट’ का निर्देशक पनि हुन् । सिएना उनलाई आफ्ना दाइजस्तै मान्छिन् । छायांकनको अनुभव बताउँदै उनले भनिन्, ‘बेन र मेरो सम्बन्ध दाजु बहिनीको जस्तो छ । त्यसैकारण सुटिङका लागि मैले त्यस्तो अप्ठेरो महसुस गरिन् । उनी निकै व्यवसायिक थिए तर म थिइनँ । ती दृश्यका लागि वातावरण पनि त्यस्तै थियो । स्क्रिप्टको हिसाबले हामीले कारदेखि बारसम्म, हरेक ठाउँमा इन्टिमेट दृश्य छायांकन गर्नुपर्दथ्यो । पूरा दिन लभ मेकिङका दृश्य ! मैले उनलाई सोधें, यो कसरी सम्भव छ ? जब सुटिङको ९ घण्टा बित्यो तब म भित्रै भित्रै गलिसकेको थिएँ । मेरो आँखाबाट लगातार आँसु बगिरहेका थिए । मैले कस्तो महसुस गरिरहेको थिएँ, त्यो मैले वर्णन गर्न सक्दिनँ । यति हुँदा हुँदै पनि मैले हाँस्नु थियो, जर्बजस्ती भएपनि । ’
कट नगरिकनै सुटिङ गर्न चाहन्थे बेनः
अन्तर्वार्तामा सिएनाले बेनले एउटा दृश्यलाई कट नगरिकनै सुटिङ गर्न चाहेको बताइन् । उनले डिओपीलाई क्यामरा रोल गर्ने इशारा गरे । ता कि उनी त्यही सहवासको दृश्य पटक–पटक कट नगरिकनै सुटिङ गर्न सकून् । यसबारे सिएना भन्छिन्, ‘मलाई थाहा थियो जोई कूहलीन (फिल्ममा बेनको भूमिकामा देखिएका) वास्तविक अभिनेता हुन् । तर तीन पटक एउटै दृश्यको छायांकन गरियो । तेस्रो पटक मैले उनलाई ‘के तिमी जिस्किरहेका छौ’ भन्ने प्रश्न गरें । बेनले आफ्नो यौनिक क्षमता दर्शकहरुलाई प्रदर्शित गर्न चाहन्छन् भन्ने मैले सोचें । उनले उक्त दृश्य कट नगरिकनै छायांकन गर्न चाहेको भन्ने बारे मैले पछि थाहा पाएँ । तर मेरो लागि यो सजिलो थिएनँ । मैले सोचें, ‘जे तिमीले देखाउन चाहेको छौ, त्यो कसैले पनि देखाउन सक्दैनँ ।’’
स्मरण रहोस्, ‘लभ बाइट नाइट’ मा बेन एफ्लेकले जोई कूहलीन र सिएनाले एमा ग्लाउडको भूमिका निभाएका छन् । फिल्म सन् २०१६ को डिसेम्बर २५ तारिखमा रिलिज भइसकेको छ ।